XOG: Maxay Ahaayeen Rekoodhadii Cajiibka Ahaa Ee Lionel Messi Looga Diwaan Galiyay Guushii Uu Barcelona Ugu Hogaamiyay Kulankii Real Valladolid? - GOOL24.NET
XOG: Maxay Ahaayeen Rekoodhadii Cajiibka Ahaa Ee Lionel Messi Looga Diwaan Galiyay Guushii Uu Barcelona Ugu Hogaamiyay Kulankii Real Valladolid?
February 17, 2019 Mahamoud Batalaale
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa xalay kooxdiisa guul ugu hogaamiyay gool rekoodhe ahaa inkasa oo uu sidoo kale qasaariyay rekoodhe labaad oo uu gool kale ku dhalin kari lahaa waxayna Barcelona ku soo laabatay tubt guusha iyada oo 7 dhibcood ku sii qabtay hogaanka La Liga ka hor inta ayna Real Madrid la ciyaarin Girona.
Laakiin sidii caadada ahayd gool kasta oo uu Lionel Messi dhaliyaa waxa uu noqday mid taariikh cusub uu ku gaadho waxaana jira rekoodho khaas ah oo loo diwaan galiyay kabtanka Argentina intii lagu jiray kulankii Valladolid ee Camp Nou.
Haddaba Gool24 ayaa halkan idiinku soo koobaysa xogta iyo rekoodhadii Lionel Messi looga diwaan galiyay goolkii uu Barcelona guusha ku gaadhsiiyay ee Kulankii Camp Nou halkan ayaanada kaga bogan kartaa.
1- Lionel Messi ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee 11 xili ciyaareed oo xidhiidh ah Barcelona u soo dhaliyay 30 gool ama wax ka badan isaga oo kulankii Valladolid ka dhaliyay goolkiisii 30 aad ee xili ciyaareedkan ee tartamada oo dhan.
Halkan kaga bogo gool dhalintii 11 kii xili ciyaareed ee ugu danbeyeay ee uu Lionel Messsi taariikhdan ku soo gaadhay:
2008/09: 38 Gool
2010/11: 53 Gool
2011/12: 73 Gool
2012/13: 60 Gool
2013/14: 41 Gool
2014/15: 58 Gool
2016/17: 54 Gool
2017/18: 45 Gool
2018/19: 30 Gool
2- Lionel Messi ayaa garaacay rekoodhkii taariikhiga ahaa ee gool dhalinta halyaygii reer Germany ee Uwe Seeler kaas oo 404 gool oo horyaal ah soo dhaliyay wuxuuna hadda Messi gaadhay goolkiisii 405 aad ee horyaalka La Liga.
Uwe Seeler ayaa 404 gool oo horyaal ah ku soo dhaliyay 476 kulan oo uu saftay intii u dhexaysay 1954-1972 kii laakiin Lionel Messi ayaa u baahday 440 kulan si uu u garaaco rekoodhkii gool dhalinta horyaalka ee Uwe Seeler.
3- Lionel Messi ayaa noqday xidiga inta ugu badan Ernesto Valverde soo badbaadiyay wuxuuna 84 kulan oo rasmi ah oo uu Valverde ka soo hoos shaqeeyay soo dhaliyay 75 gool waxaana wali rekoodhka ugu fiican haysta Pep Guardiola oo uu Messi 211 gool ugu soo dhaliyay 219 kulan halka Luis Enrique oo 158 kulan soo maamulay uu Messi ku soo dhaliyay 153 gool.
4- Lionel Messi ayaa xili ciyaareedkan 22 kulan oo horyaalka La Liga ah ku soo dhaliyay 22 gool wuxuuna sidoo kale soo sameeyay 10 gool caawineed taas oo la micno ah in uu 22 kulan ku soo lug lahaa 32 gool oo horyaalka la Liga ah.
5- Lionel Messi ayaa qasaariyay 24 rekoodhe oo ka mid ah 106 rekoodhe oo uu u tuuray kooxdiisa Barcelona iyo xulkiisa Argentina wuxuuna lumiyay 21 jeer oo uu Barca ka qasariyay isaga oo 90 jeer Barca rekoodhe u tuuray halka 16 rekoodhe oo uu Argentina u tuuray uu 3 jeer qasaariyay.